Air Astana waxay aragtaa soo kabashada kadib luminta samaynta 2020
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air Astana waxay aragtaa soo kabashada kadib luminta samaynta 2020
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Kazakhstan • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
In kasta oo saamaynta ba'an ee aafada ku haysa safarka caalamiga ah aysan u baahnayn faahfaahin, shirkadda duulimaadka way adkeysanaysaa
Air Astana khasaarihii labaad ee abid soo gaara wuxuu ahaa natiijada wadarta ama qeyb ahaan xiritaanka uu sababay CUDURKA-19 faafa
Bilihii la soo dhaafay Air Astana waxay dib u soo celisay duulimaadyadii Moscow, Dubai, Tashkent, Frankfurt, Seoul, Bishkek, Kiev, Istanbul, Antalya, iyo Sharm El Sheikh, marka lagu daro bilaabida duulimaadyada Maldives, Mattala (Sri Lanka) iyo Hurghada ( Masar)
Air Astana waxay howlgab ka noqotay diyaaradeeda Boeing 757 iyo Embraer 190 diyaaradeed 2020, waxayna hada si gaar ah ugu shaqeysaa Airbus 321 Long Range iyo Model-ka dambe ee Boeing 767s oo ku socda marinkeeda waaweyn ee caalamiga ah.
Air Astana waxay ku qiyaaseysaa waxqabadka maaliyadeed ee bilaha la isku daray bilaha Janaayo iyo Febraayo 2021 heerkeedii ugu sarreeyay tan iyo 2017, ka dib markii ay soo warisay khasaaro dhan $ 94 milyan sanadka 2020. Tirada 2020, duulimaadka khasaarihiisa sanadlaha ah, wuxuu ahaa natiijada wadarta ama xirmooyin qayb ahaan ah oo uu sababay cudurka faafa ee coronavirus, taasoo keentay awood iyo dakhli hoos udhacay 47% iyo 55% siday u kala horreeyaan. Wadarta rakaabkii siday waxay hoos u dhacday 28% ilaa 3.7 milyan.
Ka faalloodka natiijooyinka, Hawada Astana Madaxweynaha iyo agaasimaha guud Peter Foster ayaa yiri, “iyadoo saameynta ba'an ee aafada ku reebtay safarada caalamiga ah aysan u baahnayn faahfaahin, shirkada duulimaadku waa adkeysi. Safarka hawada ee gudaha si xoog leh ayuu uga soo kabtay bishii May, shirkadeena qiimaha jaban ee FlyArystan waxay diiwaangelisay 110% kobaca rakaabka. Xamuulku wuxuu haystay sanad wanaagsan, oo ay ka caawisay beddelka Boeing 767 oo loo beddelay qaab xamuul oo dhan ah, iyo shabakad caalami ah oo qayb ahaan la soo celiyay, oo ay weheliyaan jidadka firaaqada ah ee cusub, oo la duubay waxsoosaar wanaagsan iyo culeysyo toddobaadyadii u dambeeyay ee sanadka. Waxaan aragnaa isbeddelladaan inay sii socdaan illaa 2021-ka, sidaa awgeedna waa mid soo hagaagtay sanadkaan.
Bilihii la soo dhaafay Air Astana waxay dib u soo celisay duulimaadyadii Moscow, Dubai, Tashkent, Frankfurt, Seoul, Bishkek, Kiev, Istanbul, Antalya, iyo Sharm El Sheikh, marka lagu daro bilaabida duulimaadyada Maldives, Mattala (Sri Lanka) iyo Hurghada ( Masar). Diyaaradda ayaa howlgab ka dhigtay duulimaadyadeeda Boeing 757 iyo Embraer 190 diyaaradood sanadkii 2020, waxayna hadda si gaar ah ugu shaqeysaa Airbus 321 Long Range iyo nooca dambe ee Boeing 767s oo ku socda marinkeeda waaweyn ee caalamiga ah. Saamaynta, ayay tidhi Foster, waa "wax soo saar muhiim ah oo ka dhex socda shabakadda, oo gaarsiinaysa heer sare oo adeeg gaarsiineed, taas oo aan aaminsanahay inay bixin doonto sida suuqyada ay tartiib tartiib u soo kabanayaan."
Air Astana, oo ah calanka xambaara Kazakhstan, ayaa bilaabay howlaheeda bishii Maajo 2002 iyada oo ay si wada jir ah u wada shaqeynayaan sanduuqa hantida qaranka ee Kazakhstan, Samruk Kazyna, iyo BAE Systems, oo leh saami dhan 51% iyo 49%.